5 milyan oo DP World looga kireeyey Deked oo aan lagu soo darin Miisaaniyadda Somaliland – Kalfadhi
February 11, 2019 February 11, 2019 Kalfadhi
Wasiirka Hormarinta Maaliyadda Somaliland, Dr. Sacad Cali Shire, ayaa sheegay in aan Miisaaniyadda 2019-ka lagu soo darin 5 milyan oo Doolar oo, sida uu sheegay, ay ku kireysan tahay Dekedda Berbara.“Sanad walba dekedda waxaynu ka qaadanaa kiro 5 milyan ah”ayuu yiri Wasiir Sacad. “Sanadkan kuma jirto, waayoo horay yaanu u qaadanay”ayuu hadalkiisa raaciyey.
Waxa uu sheegay in Imaaraadka ay Somaliland siisay shaqada ee aysan siin dhulka, sida uu hadalka u dhigay. “Dekedda, DP World ma aynaan siin; waxaan siinay shaqada” ayuu yiri Dr. Sacad. Laakiin, waxa uu sheegay in Saldhigga ay ka siiyeen Berbara aysan Dowladda Somaliland ka kireyn Imaaraadka. “Saldhiga kiro kama qaadanno” ayuu si kooban u yiri Wasiirka Hormarinta Maaliyadda Somaliland.
Isaga oo isku dayaya inuu faahfaahiyo sababta uu saldhigaas u yahay lacag la’aan ayuu sheegay in ay Somaliland saldhigaas ku beddelatay waddooyin loo dhiso. “Saldhiga, hishiiska aynu la galnay Imaaraadka waxa weeye iney inoo dhisaan waddo- Barbara ilaa iyo Wajaale- iyo iney inoo dhisaan Garoonka (Diyaaradaha)”ayuu yiri Dr. Sacad.
Hadalkiisaan ayaa imaanaya iyada oo ay todobaadyadan su’aalo fara badan ka yimaadeen in aysan Shirkadda DP World waxba ku kordhin Dekedda Berbera muddo 3 sano ku dhaw oo ay maamuleysay. “Shirkadda DP World la yiraa, wax alaaliyo wax ay ka qabatay Dekedda Berbara ma jirto” ayuu yiri Xildhibaan Saciid Cartan Cusmaan, oo ku dhaliilayey DP World in ay dooneyso in ay dabarto dhaqaalaha Somaliland, sida uu hadalka u dhigay.
Dadka Reer Somaliland ayaa Baraha Bulshadu isku weydaarsato aragtiyada isku dhaafsanaya in ay Xukumaddu musuq-maasuq lugaha kula jirto. Laakiin, Hanti-dhawraha Somaliland, Axmed Yuusuf Dirir, ayaa mar sii horeysay soo bandhigay in ay dagaal adag kula jiraan musuqaas laga cabanayo. Waxa uu sheegay in ay jiran dad loo xukumay musuq dartii, kuwa la soo taagayo maxkamad iyo qaar uu baaritaan ku socdo, sida uu hdalka u dhigay. “Waxaan uga digeynaa cid kasta oo hanti qaran gacanta ku haysa in markasta lagula xisaabtami doono hantidaas qaranka ee ay gacanta ku hayaan” ayuu yiri Axmed Dirir.
Xildhibaanno codsanaya in arrinta Shirkii Shidaalka Soomaaliya la hor keeno Baarlamaanka